ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ/kæmˈboʊdiə/ ( )  အား ကမ်ပူးချား ဟုလည်း သိကြပြီး တရားဝင်အမည်မှာ ကင်းဒမ်းအော့ဖ် ကမ္ဘောဒီးယား ဖြစ်ကာ အရှေ့တောင်အာရှရှိ အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆယ် တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဧရိယာအားဖြင့် ၁၈၁,၀၃၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၆၉,၈၉၈ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် လာအိုနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ တို့နှင့် ထိစပ်လျှက် တည်ရှိသည်။
အေဒီ ၈၀၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ဂျာယာဗာမန် က သူ့ဘာသာ ဘုရင်အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီး စစ်တိုက်နေကြသော ချန်လာ ခမာမင်းသားများကို "ကမ်ဘူဂျာ" အမည်အောက်တွင် စုစည်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် ခမာ ဧကရာဇ်နိုင်ငံတော် စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့သော အချိန်ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အောင် စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့ကာ ဘုရင်မင်းဆက် ဆက်တိုက်တို့အား အရှေ့တောင်အာရှတစ်ဝှမ်းအား ထိန်းချုပ် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စေခဲ့ပြီး တန်ခိုးအာဏာနှင့် စည်းစိမ် အမြောက်အများကို စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယပုံသဏ္ဌာန် တိုင်းပြည်မှာ အရှေ့တောင်အာရှ နေရာ အများစုအား ပထမဦးစွာ ဟိန္ဒူဘာသာ နောင်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျံ့နှံ့စေခဲ့ပြီး ဒေသတဝှမ်းတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်း အမြောက်အများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကာ အန်ကော တစ်နေရာတည်းတွင်ပင် ပုထိုး နှင့် အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ ၁,၀၀၀ ကျော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အန်ကောဝပ် သည် ထိုအဆောက်အအုံများထဲတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပြီး ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးများသည် သူတို့၏ နိုင်ငံကို "ဆော့ခမာ" ဟု ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ "ခမာတို့၏မြေ" ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပိုမို၍ တိကျသော အခေါ်အဝေါ်အနေနှင့် "ပရာတေး ကမ်ပူးချား" ဟု သုံးနှုန်းပြီး "ကမ်ပူးချားတို့၏ နိုင်ငံ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အနောက်ကမ္ဘာတွင် "ကမ္ဘောဒီးယား" ဟု အမြဲတစေ ရည်ညွှန်းလေ့ ရှိသော်လည်း အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘောဒီးယား အစား ကမ်ပူချီးယား ဟူ၍ အသံထွက်လေ့ရှိသည်။
အန်ကောမတိုင်မီခေတ် နှင့် အန်ကောခေတ်
ခမာဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်သည် ချန်နလာ၏ အပျက်အစီးများကြားမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၈၀၂ ခုနှစ်တွင် ခိုင်မာစွဦ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကာ ဒုတိယ ဂျာယာဗာမန် ဘုရင် (အေဒီ ၇၉၀မှ အေဒီ ၈၃၅ အထိ အုပ်စိုးခဲ့သည်။) ဂျားဗားပြည်မှ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခဲ့ပြီး မိမိဘာသာ ဒေဝါရာဂျာဘွဲ့ ခံယူခဲ့သည်။ သူနှင့် သူ၏ နောက်လိုက်များသည် ဘုရား-ဘုရင် ဂိုဏ်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နယ်မြေသိမ်းပိုက်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၉ ရာစုမှ ၁၅ ရာစုအတွင်း ထိုဒေသ၌ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့သည်။ အဋ္ဌမဂျာရာဗာမန် လက်ထက်တွင် အန်ကောဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်အား မွန်ဂိုမှ ကူဗလိုင်ခန်၏ စစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း ဘုရင်အနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၃ ရာစုခန့်တွင် သီရိလင်္ကာ ဘုန်းကြီးများမှ အရှေ့တောင်အာရှအား ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဘာသာတရားမှာ ပြန့်ပွားလာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အန်ကော၌ ရေပန်းစားသော ဘာသာတရားအဖြစ် ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာနေရာတွင် အစားထိုး ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၂၉၅ ခုနှစ် တတိယ အင်ဒရာ ဗာမန် အာဏာရသည်အထိ နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင်ဘာသာ ဖြစ်မလာခဲ့ပေ။
လွတ်လပ်ရေးရခြင်း နှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ
၁၉၅၅ တွင် သီဟာနုသည် သူ့ဖခင်ကို အလေးပေးသော အနေဖြင့် နန်းစွန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရသည်။ သူ၏ ဖခင် ၁၉၆၀ တွင် ကွယ်လွန်သည့် အခါတွင် သီဟာနုသည် နိုင်ငံ၏ ဥသျှောင် တဖန် ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းသားကြီး ဘွဲ့ကို ခံယူခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲ အရှိန်မြင့်လာသော အခါ သီဟာနုသည် စစ်အေးတိုက်ပွဲ အတွင်း ကြားနေသည့် ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သီဟာနု အနေနှင့် ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်တို့အား ကမ္ဘောဒီးယားကို ခိုလှုံရာ နယ်မြေ အဖြစ် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး တောင်ဗီယက်နမ်တွင် တိုက်ခိုက်နေသော သူတို့၏ စစ်တပ်များသို့ လက်နက် နှင့် အခြား အကူအညီများ တင်ပို့ရန် ထောက်ပို့လမ်းကြောင်း အဖြစ် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ထိုပေါ်လစီအား ရှက်စရာကောင်းသော ပေါ်လစီဟု ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသား အမြောက်အများက ရှုမြင်ကြသည်။ ၁၉၆၇ တွင် သီဟာနု မှ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာမှ သတင်းစာဆရာ စတန်လေ ကာနိုးအား အကယ်၍ အမေရိကန်တို့အနေနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကို မထိခိုက်ပါက ဗီယက်နမ်တို့၏ ခိုလှုံရာနေရာများကို ဗုံးကြဲမည် ဆိုလျှင် သူ့အနေနှင့် ကန့်ကွက်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဆိုဗီယက်တို့ သိမ်းဆည်းထားသော မှတ်တမ်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် မြောက်ဗီယက်နမ် တို့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား သိမ်းဆည်းရန် ကြိုးစားမှုအား ခမာနီတို့မှ အတိအလင်း တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပိုပေါ့ နှင့် ဒုတိယအကြီးဆုံး ဖြစ်သော နွမ်းချာတို့မှ ညှိနှိုင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မြောက်ဗီယက်နမ်တို့မှ ကမ္ဘောဒီးယား စစ်တပ်တို့ တပ်စွဲထားသော နေရာများကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ကမ်ပူးချား ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီပီကေ) မှ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို တိုက်ခိုက်မှုအား တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မြောက်ဗီယက်နမ်တို့၏ ကျူးကျော်မှုကို တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ရစ်ချက် နစ်ကဆင် မှ အမေရိကန်နှင့် တောင်ဗီယက်နမ် ကုန်းတပ်များသည် ကမ္ဘောဒီးယားရှိ မြောက်ဗီယက်နမ်တို့၏ အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်စီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားသို့ ဝင်ရောက်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။အမေရိကန်နှင့် တောင်ဗီယက်နမ်တပ်များမှ လက်နက်ခဲယမ်း အမြောက်အများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော်လည်း မြောက်ဗီယက်နမ်တပ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ကိစ္စမှာ ခက်ခဲခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်တို့ ကျူးကျော်ခြင်း နှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ
အသစ်တည်ထောင်လိုက်သော နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်သည့် အနေနှင့် ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးနေရသော အစိုးရ၏ အစု ၃ စုမှ ဒီမိုကရက်တစ် ကမ်ပူးချား၏ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ခမာနီများ ၊ သီဟာနု၏ ဘုရင် သစ္စာခံ အစုအဖွဲ့နှင့် ခမာပြည်သူ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး တို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အား ကုလသမဂ္ဂမှ အသိအမှတ် ပြုခဲ့သည်။ ခမာနီတို့၏ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သော ချွန်း ပရာဆစ်အား ဆက်လက်ထားရှိခဲ့သော်လည်း သူသည် ကွန်မြူနစ် မဟုတ်သော ကမ္ဘောဒီးယား ပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ရသည်။ ဗီယက်နမ်တို့မှ ကမ္ဘောဒီးယားမှ ဆုတ်ခွာရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်တို့မှ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ဧရိယာအားဖြင့် ၁၈၁,၀၃၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၆၉,၈၉၈ စတုရန်းမိုင်) မျှရှိပြီး အပူပိုင်းဒေသအတွင်း လုံးဝ ကျရောက်ကာ မြောက်လတ္တီကျု ၁၀° မှ ၁၅° ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၁၀၂° မှ ၁၀၈° ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် လာအိုနိုင်ငံ ၊အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။၄၄၃-ကီလိုမီတာ (၂၇၅-မိုင်) ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ တလျှောက်တွင် ၄၄၃-ကီလိုမီတာ (၂၇၅-မိုင်) ရှည်လျားသော ကမ်းရိုးတန်း ရှိသည်။
မဲခေါင်ဒေသသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ အရှေ့ပိုင်းဒေသများကို ဖြတ်၍ တောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းလျှက် ရှိသည်။ မဲခေါင်မြစ်၏ အရှေ့ပိုင်း အသွင်ပြောင်းလွင်ပြင်များသည် အရှေ့ပိုင်းကုန်းမြင့်များ၊ သစ်တောထူထပ်သော တောင်ကုန်းများနှင့် လာအိုနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအထိ ဆန့်ထွက်နေသော ကုန်းမြေမြင့်များနှင့် ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ထင်ရှားသော ကုန်းမြင့်ဒေသ နှစ်ခု ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ကရာဗန်တောင်တန်း နှင့် ဒမ်မရေးတောင်တန်းတို့ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ပေါင်းစပ်ကာ တုန်နယ်ဆပ် နှင့် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တို့ကြားရှိ မြေဧရိယာ အတော်များများတွင် နေရာယူထားသော ကုန်းမြင့်ဒေသ အဖြစ် တည်ရှိသည်။
အီးပီအိုင်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားအနေနှင့် အဆိုးရွားဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် ရှိသည့် နယ်ပယ်များမှာ လေထုအရည်အသွေး (၁၄၈)၊ ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု (၁၄၀) နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြဿနာများပေါ်တွင် မူတည်သည့် ကျန်းမာရေး သက်ရောက်မှု (၁၃၇) တို့ ဖြစ်ပြီး ရေဆိုးနှင့်မိလ္လာကိစ္စရပ်များ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနှင့် သစ်တော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့မှာ နောက်မှ နီးကပ်စွာ လိုက်လာကြသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် လွန်စွာကျယ်ပြန့်သော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် ဒေသများ ကုန်းပေါ်နှင့် ရေထဲတွင် ရှိပြီး ကုန်းပေါ်တွင် ရှိသော ထိန်းသိမ်းရေးဒေသမှာ နိုင်ငံ၏ ၂၀% ခန့် ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားအား ဇီဝမျိုးကွဲများနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ ကျက်စားရာမြေနှင့် ပတ်သက်၍​ ပျမ်းမျှထက်သာလွန်သော အဆင့် ၆၁ ရရှိခဲ့သော်လည်း သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ တရားမဝင် သစ်ခုတ်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ထို ထိန်းသိမ်းရေးဒေသများနှင့် သားကောင်များ ကျက်စားရာမြေတို့မှာ အလွန်အမင်း ပြုန်းတီးလျှက် ရှိပြီး အစိုးရအနေနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်သည့် နေရာများနှင့် စိုက်ခင်းများကို ထိန်းသိမ်းရေးဒေသများတွင် နေရာချထားမှုကြောင့်လည်း တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်သည်။
၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းတွင် နှစ်စဉ် သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှုန်းမှာ ၁.၃ % ဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုတွင် အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး နယ်မြေများလည်း အများအပြားပါဝင်ပြီး မျိုးသုဉ်းရန်စိုးရိမ်ရသော တိရစ္ဆာန်နှင့် ဒေသရင်းနေ တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ် အများအပြားမှာ စားကျက်မြေ နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် မျိုးသုဉ်းရမည့် အခြေအနေဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားရှိ သစ်တောပြုန်းတီးရခြင်းအတွက် အကြောင်းအရင်း များစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်း မှစ၍ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြီးမားစွာ ရှင်းလင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။ တကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာ ဖြစ်သော မြေရှင်းလင်းခြင်းမှာ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် နေရာအနှံ့အပြား ဖြစ်ပွားလျှက် ရှိသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးရခြင်းတွင် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ကမ္ဘောဒီးယားရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ အပြင် တကမ္ဘာလုံးမှ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းများလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။
မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင် အထူးသဖြင့် လာအိုနိုင်ငံ၏ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ အစားအသောက် ရရှိမှုကို အန္တရာယ် အစစ်အမှန် အဖြစ် ခြိမ်းခြောက်လျှက် ရှိသည်။ မြစ်အထက်ပိုင်းမှ ဆည်များ တည်ဆောက်မှုကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယား၏ အဓိက ပရိုတိန်းအတွက် ပံ့ပိုးပေးနေသော ငါးများကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော မဲခေါင်မြစ်မှ နုန်းမြေကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သော ရေချိုကန်ဖြစ်သည့် တုန်နယ်ဆပ်မှ ကြွယ်ဝသော ငါးမျိုးစုံတို့သည် ချို့တဲ့သော နိုင်ငံ၏ ပရိုတိန်းကို အများစု ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထိုကန်များသည် ပုံမှန် မဟုတ်ပေ။ ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုတွင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး မိုးရွာ၍ မဲခေါင်မြစ်မှ ရေစီးသည့်အခါတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ချဲ့ကားသွားခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဖြစ်သော ဂေါ်ဒွန် ဟို့ဂရိ မှ "ဒီငါးတွေဟာ သူတို့အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ စီးပွားရေးဘက်ကပဲ ကြည့်ကြည့်။ အာဟာရဘက်ကပဲ ကြည့်ကြည့်။" ဟု ပြောပြီး မဲခေါင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော သို့မဟုတ် တည်ဆောက်နေသည့် မည်သည့်ဆည်မဆို ငါးများအတွက် ကောင်းသောအလားအလာ မဟုတ် ဟု သူက ဆိုခဲ့သည်။
တရားဝင်အားဖြင့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် "နိုင်ငံမှာ တစ်ပါတီ စနစ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယား ပြည်သူ့ပါတီနှင့် ခမာနီ အစိုးရမှ ပြောင်းလဲလာပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကတည်းက အာဏာရခဲ့သော ဟွန်ဆန် တို့မှ သာ ကြီးစိုးလျှက် ရှိသည်။သူ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များမှာ သူနှင့် သူ၏ မိန်းမ ဘန်းရာနီ တို့၏ နောက်လိုက်ခရိုနီများ အတွက်သာ အကျိုးအမြတ် ရှိသည်။" ဟု ဆိုသည်။လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ အာရှ ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ်ရောဘတ်မှ ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရအား "အာဏာရှင် ညွန့်ပေါင်း နှင့် အပေါ်ယံ ဒီမိုကရေစီ" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်သည် ၇၄ နှစ်အထိ အုပ်ချုပ်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသည်။  သူသည် ဘက်ပြောင်းလာသော ခမာနီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ အစိုးရအား လူ့အခွင့်အရေးကို လျစ်လျူရှုပြီးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ မကျေနပ်မှု ထုတ်ဖော်ခြင်းအား ဖိနှိပ်သည် ဟု အမြဲတစေ စွပ်စွဲခံရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အား ဟွန်ဆန်၏ အတိုက်အခံတို့နှင့် အငြင်းအခုံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြို့တော်တွင် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိ၍ သေဆုံးစေခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က ဆန္ဒပြသူ ၂၀,၀၀၀ စုရုံးခဲ့ပြီး အချို့မှာ အဓိကရုဏ်းရဲများနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သာမန် လယ်သမားဘဝမှ လာခဲ့သော ဟွန်ဆန်သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ် အာဏာရရှိချိန်တွင် အသက် ၃၃ နှစ်သာ ရှိပြီး သူ့အား အချို့မှ နှစ်ရှည်ကြာ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာရှင်ဟု ယူဆကြသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ဖနွမ်းပင်တွင် အငြင်းပွားနေသော ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဆန္ဒပြနေခြင်းအား သတင်းယူနေသော သတင်းသမားများအား ရဲများနှင့် အရပ်ဝတ်များက လေးဂွများ နှင့် ကျင်စက်များဖြင့် တမင်သက်သက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်ကလပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရစ်ခ် ဗယ်လန်ဇူးလားအား တိုက်ခိုက်နေခြင်းကို ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းအဖြစ် တွေ့ရသည်။ အတိုက်အခံတို့မှ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်သဖြင့် ပါလီမန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး သတင်းထောက် ၇ ယောက်တို့သည် ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယား ဆန္ဒပြသူ အနည်းဆုံး ၂ ဦးမှာ လေးခွထိမှန်ခံခဲ့ရသဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အဆင့်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအများစုထက် ပို၍မြင့်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် "ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ" ကို ပြဌာန်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ ရှိနေသည်။ ခြစားမှုသည် တရားစီရင်ရေး၊ ရဲ နှင့် အခြားသော နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို သက်ရောက်စေသည်။ အစိုးရ အရာရှိများ အနေနှင့် နီးစပ်သူကို ဦးစားပေးခြင်း နှင့် အပြစ်ရှိသူကို လျစ်လျူရှု ပေးခြင်းတို့ကို နေရာတကာ တွေ့ရသည်။ တရားစီရင်ရေး နှင့် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနတို့ကြားတွင် ရှင်းလင်းသော ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခြင်းကြောင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင် နိုင်ငံရေးအရ လွှမ်းမိုးမှုများစွာ ရှိသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် လာဘ်စားမှုများကို ကြုံတွေ့နေရသည်မှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရယူခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်း နှင့် လျှော့ပေါ့သော တရားစီရင်ချက် ရရှိစေရေး တို့အတွက် ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီများ အနေနှင့် လိုင်စင်များနှင့် ပါမစ်များ ရယူရန် အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ပါမစ်များအတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အမြဲတွေ့နေရသော အလေ့အထ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေတွင် သတင်းပေးသူများအား ကာကွယ်ပေးမှု မရှိပဲ သူတို့ သတင်းပေးသည့် ခြစားမှုကို သက်သေမပြနိုင်ပါက ထောင်ခြောက်လအထိ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် အား အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒရာ မိုဒီ နှင့် အတူ နယူးဒေလီတွင် တွေ့ရပုံ ၊​၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကို ပရက် ဆိုခွန် ဦးဆောင်သော နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကိုင်တွယ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသည် ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့တို့၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် ၊​အာဆီယံ​တို့၏ အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ သို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော အရှေ့အာရှထိပ်သီးညီလာခံ သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်အား ရုရှားသမတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်နှင့် အတူ မော်စကိုတွင် တွေ့ရပုံ ၊​၂၀၁၆ မေ ၁၉
၁၉၇၀ ခုနှစ်များနှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှ ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းသော အကွဲအပြဲများကို ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ အကြား နယ်စပ် အငြင်းပွားမှု အချို့ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများမှာ ကမ်းလွန်ပင်လယ်အတွင်းရှိ ကျွန်းအချို့၊ ဗီယက်နမ် နှင့် နယ်နိမိတ်၏ အချို့အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် သတ်မှတ်မထားသော ပင်လယ်နယ်နိမိတ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အနေနှင့် နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုများ ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ပရီးယား ဗီဟီးယား ပုထိုးနှင့် ကပ်လျှက် နေရာတွင် စစ်တပ်အချင်းချင်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားပြီး ဆက်ဆံရေး ပျက်ယွင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား အနေနှင့် နယ်မြေအများစုကို ပိုင်ဆိုင်သည် ဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို မလိုက်နာပဲ ကမ္ဘောဒီးယား စစ်တပ်မှ အရင်းအမြစ် အလုံအလောက် မရှိသဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ထားခဲ့သော နေရာများတွင် အခိုင်အမာတည်ဆောက်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ 
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် တရုတ်တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်များတွင် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ နောက်ခံပေးထားသော တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကိုကောင်းပြည်နယ်ရှိ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းရိုးတန်း၌ ၉၀ km (၅၆ mi) ရှည်လျားသော နေရာတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်လျှက် ရှိသည်။ ထိုဆိပ်ကမ်းသည် အပျော်စီးသင်္ဘောများ၊ ဝမ်းပုံလောင်းသင်္ဘောများ နှင့် စစ်သင်္ဘောများ ကပ်ရောက်နိုင်သည် အထိ ရေစူးနက်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၏ သံတမန် ရေးအရ ထောက်ခံမှုသည် တရုတ်တို့၏ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အငြင်းပွားနေသည့် နေရာများအား ရယူရန်ကြိုးပမ်းမှုကို အထောက်အကူပေးသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသည် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာဆီယံ၏ စည်းမျဉ်းအရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ကန့်ကွက်ပါက အဖွဲ့တစ်ခုလုံး အနေဖြင့် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ အတွက် တရုတ်တို့အတွက် ချိန်ညှိပေးမည့် အလေးတုံး တစ်ခု ဖြစ်သည်။ 
Cambodia။ Dictionary.reference.com။ 16 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cambodia to celebrate day for indigenous people near Angkor Wat။ News.xinhuanet.com။ 25 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Consumerism booms as Cambodia embraces once-forbidden capitalism။ Reuters။ 28 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
2013 Freedom House။ Freedom House (2013)။6April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
2013 Corruption Perceptions Index။ Transparency International (2013)။6April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The 2013 Human Development Report – "The Rise of the South: Human Progress inaDiverse World" 144–147။ Human Development Report Office United Nations Development Programme။2March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cambodia's opposition leader says Australian asylum seeker deal will fund corruption။ Australian Broadcasting Corporation။ 28 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Chueyprasit, Orapa။ "Thailand ranks 2nd in ASEAN for the best quality of life"၊ 27 March 2014။ Archived from the original on 28 March 2014။
David Roberts (29 April 2016)။ Political Transition in Cambodia 1991–99: Power, Elitism and Democracy။ Taylor & Francis။ ISBN 978-1-136-85054-7။ (section XI, "Recreating Elite Stability, July 1997 to July 1998")
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF CAMBODIA။ Office of the Council of Ministers (25 January 2017)။4September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Cambodian Parliament launches era of one-party rule"၊5September 2018။ 26 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Boyle၊ David။ "Cambodia Set to Become One Party State"၊ Voice of America၊ VOA Cambodia၊ 30 July 2018။ 26 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Cambodia to outgrow LDC status by 2020"၊ The Phnom Penh Post၊ 18 May 2011။ 20 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UN list of Least Developed Countries။4November 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
WJP Rule of Law Index® 2018–2019။4November 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Relazione del primo viaggio intorno al mondo – Wikisource။
"kampuchea. (n.d.). Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition."။ Dictionary.com။ 31 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cambodia။ 31 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
On some Cambodian Words။ Thai-Yunnan Project Newsletter No. 20., Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies Australian National University by Serge Thion။ Nectec။ 31 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
3 Unlikely Cambodian Allies Map War on Vietnam (9 July 1982)။ 18 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Stark, Miriam (2005)။ "Pre-Angkorian and Angkorian Cambodia" (PDF)။ in Glover၊ Ian; Bellwood၊ Peter S. (eds.)။ Southeast Asia: from prehistory to history။ Routledge။ ISBN 978-0-415-39117-7။ 10 June 2010 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 August 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tranet၊ Michel (20 October 2009)။ The Second Prehistoric Archaeological Excavation in Laang Spean (2009)။ 1 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Oldest Ceramic in Cambodia's Laang Spean (1966–68) (20 October 2009)။ 1 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Higham, Charles (January 2002)။ The civilization of Angkor။ Phoenix။ ISBN 978-1-84212-584-7။ , pp.13–22
Research History။ Memot Centre for Archaeology။6February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Albrecht, Gerd (2000). "Circular Earthwork Krek 52/62 Recent Research on the Prehistory of Cambodia". Asian Perspectives 39 (1–2). ISSN 0066-8435. Retrieved on 15 November 2009.
Higham, Charles (1989)။ The Archaeology of Mainland Southeast Asia။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-27525-5။ , p.120
"Archaeology and Archaeozoology of Phum Snay: A Late Prehistoric Cemetery in Northwestern Cambodia" (2006). Asian Perspectives 45 (2). ISSN 0066-8435.
"History of Cambodia"။ Britannica.com။ 16 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Khmer Empire Map။ Art-and-archaeology.com။ 27 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Windows on Asia။ 21 May 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Angkor Era – Part III (1181–1309 A.D) Archived 1 December 2012 at the Wayback Machine., Cambodia Travel.
"Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America: A comprehensive archaeological map of the world's largest pre-industrial settlement complex at Angkor, Cambodia" (2007). Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (36): 14277–14282. doi:10.1073/pnas.0702525104. PMID 17717084. PMC:1964867. Retrieved on 27 June 2010.
Chandler, David P (1991) The Land and the People of Cambodia, HarperCollins. New York, New York. p. 77, ISBN 0060211296.
Kamm၊ Henry (1998)။ Cambodia: report fromastricken land။ New York: Arcade Publishing။ p. 27။ ISBN 1-55970-433-0။
Kamm၊ Henry (1998)။ Cambodia Report fromaStricken Land။ New York: Arcade Publishing။ p. 23။ ISBN 1-55970-507-8။
Norodom Sihanouk (1973)။ My War with the CIA, The Memoirs of Prince Norodom Sihanouk as related to Wilfred Burchett။ Pantheon Books။ ISBN 0-394-48543-2။
"Bombs Over Cambodia" (October 2006). The Walrus: 32–36. “The evidence of survivors from many parts of [Cambodia] suggests that at least tens of thousands, probably in the range of 50,000 to 150,000 deaths, resulted from the US bombing campaigns ..."” See Making More Enemies than We Kill? Calculating U.S. Bomb Tonnages Dropped on Laos and Cambodia, and Weighing Their Implications။ The Asia-Pacific Journal (26 April 2015)။ 19 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mosyakov, Dmitry (2004) "The Khmer Rouge and the Vietnamese Communists: A History of Their Relations as Told in the Soviet Archives", in Susan E. Cook, ed., Genocide in Cambodia and Rwanda, Yale Genocide Studies Program Monograph Series No. 1, pp. 54 ff.: "In April–May 1970, many North Vietnamese forces entered Cambodia in response to the call for help addressed to Vietnam not by Pol Pot, but by his deputy Nuon Chea. Nguyen Co Thach recalls: "Nuon Chea has asked for help and we have liberated five provinces of Cambodia in ten days."" Archived copy။9March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Locard, Henri (March 2005). "State Violence in Democratic Kampuchea (1975–1979) and Retribution (1979–2004)". European Review of History 12 (1): 121–143. doi:10.1080/13507480500047811.
Kiernan, Ben (2003). "The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death Tolls in Cambodia, 1975–79, and East Timor, 1975–80". Critical Asian Studies 35 (4): 585–597. doi:10.1080/1467271032000147041. “We may safely conclude, from known pre- and post-genocide population figures and from professional demographic calculations, that the 1975–79 death toll was between 1.671 and 1.871 million people, 21 to 24 percent of Cambodia's 1975 population.”
Heuveline၊ Patrick (2001)။ "The Demographic Analysis of Mortality Crises: The Case of Cambodia, 1970–1979"။ Forced Migration and Mortality။ National Academies Press။ pp. 102–105။ ISBN 978-0-309-07334-9။ As best as can now be estimated, over two million Cambodians died during the 1970s because of the political events of the decade, the vast majority of them during the mere four years of the 'Khmer Rouge' regime. This number of deaths is even more staggering when related to the size of the Cambodian population, then less than eight million. ... Subsequent reevaluations of the demographic data situated the death toll for the [civil war] in the order of 300,000 or less. cf. Cambodia: U.S. bombing, civil war, & Khmer Rouge။ World Peace Foundation (7 August 2015)။
""The Khmer Rouge and Pol Pot's Regime Archived 14 July 2018 at the Wayback Machine.. Mount Holyoke University.
Kevin Baker (3 November 2014)။ The Worst World Disasters of All Time။ p. 23။ ISBN 978-1-4566-2343-2။
A Brief History of the Cambodian Genocide။ cambodiangenocide.org။
Autobiography of Thiounn Prasith – Cambodian Genocide Program – Yale University။
"Lifting the US embargo against Cambodia"၊ Department of State Dispatch 54၊ 20 January 1992။
Country Profile of Cambodia။ State.gov (13 June 2012)။
Carolyn L. Gates; Mya Than (2001)။ ASEAN Enlargement: impacts and implications။ Institute of Southeast Asian Studies။ ISBN 978-981-230-081-2။
Statement by the Secretary-General of ASEAN Welcoming the Kingdom of Cambodia as the Tenth Member State of ASEAN: 30 April 1999, ASEAN Secretariat။ ASEAN Secretariat (2008)။
Strangio၊ Sebastian (2014)။ Hun Sen's Cambodia။ Yale University Press။ ISBN 978-0-300-19072-4။
Brinkley၊ John (2011)။ Cambodia's Curse: The Modern History ofaTroubled Land။ Hachette UK။ pp. 460–463။ ISBN 978-1-4596-2493-1။ 17 November 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [Javier Merelo de Barbera] spoke to dozens of [villagers] during the 2008 election campaign, and he said he observedaconstant theme: 'People were very afraid of the CCP losing. They were very afraid of change.' After all, for centuries change in Cambodia has generally led to misery or death.
De Launey, Guy (26 July 2010)။ Khmer Rouge prison chief Duch found guilty။ Bbc.co.uk။
"Leader of Khmer Rouge torture prison gets life sentence"၊ CNN၊3February 2012။
Carmichael, Robert။ Cambodian Premier says No More Khmer Rouge Trials | News | English။ Voanews.com။
The World Factbook — Central Intelligence Agency (in en)။
Geography of Cambodia – World Atlas (in en)။
Hays၊ Jeffrey။ TONLE SAP | Facts and Details (in en)။
Laurenson၊ Jack။ Climate Change Hits Coastal Cambodia Hard။
Reaksmey။ UN Reports: Cambodia At High Risk From Climate Change – Cambodia's Official Climate Change Website။
@NatGeoUK (2020-08-17)။ Cambodia's biggest lake is running dry, taking forests and fish with it (in en-gb)။
Osborne၊ Zoe။ "Mekong basin's vanishing fish signal tough times ahead in Cambodia" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 2019-12-16။
Nobleman၊ Marc Tyler (2003)။ Cambodia။ Mankato, Minn: Bridgestone Books။ p. 7။ ISBN 978-0-7368-1370-9။
Rising Rivers Flood Schools, Prisons, Over 180,000 Hectares of Farms။ VOD (14 October 2020)။
EPI (2016): Cambodia Archived 30 December 2016 at the Wayback Machine.
2016 Report | Environmental Performance Index – Development (11 February 2017)။4February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Handley, Erin။ "Kingdom ranks low on global green list"၊ 18 February 2016။
Logging threatens Cambodian tragedy – UN။ Planet Ark (6 March 2003)။
Butler, Rhett (15 August 2014)။ Cambodia။ Mongabay။
Cambodia။ Chatham House, The Royal Institute of International affairs (2015)။
Cambodian Government Authorises Clear-Cutting in National Park။ Global Witness (9 July 2004)။
Cambodia Sleeps With the Fishes။ Foreign Policy (6 June 2014)။
LalinDuch (9 December 2015)။ Mother Nature's Youthful Ambassadors Get to Work။ Khmer Times။
Cambodia: Environmental groups given chance to address PM Hun Sen at forum။ chatham House (22 August 2016)။
Otsuki, Kei (17 January 2012)။ Environmental management: Boosting research in Cambodia။ United Nations University။
Cox၊ Jonathan (2 November 2015)။ Charting the Next Seven Years of Environmental Policy။ Khmer Times။
Cambodia 1993 (rev. 2008)။
Bahree, Megha (24 September 2014)။ In Cambodia, A Close Friendship With The PM Leads To Vast Wealth For One Power Couple။ Forbes။
NEOU၊ VANNARIN။ "Hun Sen Reveals Plan to Win3More Elections, Retire at Age 74"၊7May 2013။
Thul၊ Prak Chan။ "As protest looms, Cambodia's strongman Hun Sen faces restive, tech-savvy youth"၊6September 2013။
Analysis: Punished at the polls, Cambodia's long-serving PM is smiling again။ Reuters။
"Cambodian Parliament launches era of one-party rule"၊5September 2018။
Boyle၊ David။ "Cambodia Set to Become One Party State"၊ Voice of America၊ VOA Cambodia၊ 30 July 2018။
Ellis-Petersen၊ Hannah။ "Cambodian PM now 'fully fledged military dictator', says report"၊ The Guardian၊ 28 June 2018။
Adams, Brad (31 May 2012)။ Adams, Brad, 10,000 Days of Hun Sen, International Herald Tribune, reprinted by Human Rights Watch.org။ Hrw.org။
Open letter to Second Prime Minister Hun Sen from Amnesty International။ Hartford-hwp.com (11 July 1997)။
"Country for Sale"၊ 26 April 2008။
Country for Sale။ Global Witness။
Coverage of Transparency International's Corruption Report by Rasmei Kampuchea Daily carried on Asia News Network,2December 2011။ Asianewsnet.net။ 10 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Transparency International's latest index။ Transparency.org။
Convictions of activists in Cambodia demonstrates dire state of justice။ Amnesty International (27 December 2012)။
Overseas Press Club of Cambodia condemns violent attack on journalists in Phnom Penh။ Australia Network News။
"Guardian report on Hun Sen as strongman"၊3December 2017။
Royal Government of Cambodia.Foreign Embassies။ 12 February 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cambodia's Political Future: Issues for U.S. Policy။ Asia Society (26 March 1998)။ 28 October 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Preah Vihear temple: Disputed land Cambodian, court rules"၊ BBC News၊ 11 November 2013။
Judgment: Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)။ International Court of Justice (11 November 2013)။ 11 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။